नेपाल टेलिकमले माघसम्म देशभर 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याउने
अक्टोबर 3, 2019 अक्टोबर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	4G, देशभर, माघ
फोरजी सेवा आगामी माघसम्म देशका सबै भागमा विस्तार गर्ने लक्ष्य टेलिकमले राखेको छ । गत माघमा सम्झौता भए बमोजिम नै एक वर्षभित्र देशभर उक्त सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य साथ काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । यो सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले १८ अर्ब खर्चिएको छ । ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई सार्थक बनाउन फोरजी सेवालाई महत्वका साथ सुरु गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले यो सेवा ८०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहजको फि्रक्वेन्सीमा चलाएको छ । अब २३०० मेगाहर्ज पनि फोरजीका लागि उपयोग गरिनेछ । टेलिकमले यो सेवालाई ‘एलटीई ए’ अर्थात आधुनिक एलटीई भनेको छ । यसमा अधिकतम् २४७ एमबीपीएसको गतिमा डाटा सेवा प्राप्त हुन्छ । औसतमा यस्तो गति १३० एमबीपीएस रहेको टेलिकमको दाबी छ ।
← के तपाई सुर्ती चुरोट छोड्न चाहनु हुन्छ ?
तपाईंको मोबाइल फोनमा 4G सेवा कसरी सेट गर्ने ? →